ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒ David B Samadi & Muhammed Mirza (၂၀၁၄) - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က Porn
တကယ်ပဲ Erectile အလုပ်မဖြစ်မှ Lead လွန်း Porn အကဲခတ်နိုင်ပါသလား?
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိပါသလား။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်အကျွံအရာများစွာသည်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးလူတိုင်းသိသည့်အတိုင်းစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသည်။ ပါတီတစ်ခုသည် porn ကိုစွဲလမ်းနေသောကြောင့်ဆက်ဆံရေးများပြားလာသည်။ ဒီစွဲလမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြsufferingနာကပိုဆိုးလာတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာမကြာခဏဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရလို့ပဲ သာ porn စွဲရှုပ်ထွေးသည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု,.
အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျား porn စောင့်ကြည့်သလဲ?
အဖြေရိုးရှင်းသောဖြစ်၏ သူတို့သည်မိန်းမ / ယောက်ျားသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများရှိသည်။
ဘယ်လိုပညာရေးမှ porn ခဲကိုစောင့်ကြည့်ရသနည်း
porn ကိုကြည့်အီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပြည်နယ်တစ်ဦးကကိုယ်စားလှယ်အလွန်အကျွံ "လိင်စိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်တစ်ခုစိုက်ထူရဖို့တစ်ခုနိုင်ခြင်းမှဦးဆောင်နေဖြင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ "
နှင့်အညီ ဒါဝိဒ်သည်ခ Samadi, MD…“ ပြproblemနာက ဦး နှောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲလိင်တံမဟုတ်ဘူး။ ” ညစ်ညမ်းသော ED သည်မည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်ဟု Samadi ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ၎င်းသည်အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အမျိုးသားများတွင်ဖြစ်သည်။
Muhammed Mirza, MD လူနာများ၏ရာခိုင်နှုန်းက 15 မှ 20 အကြောင်းကိုထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါအဖြစ်သူတစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှု-related ခွအေနအေ၏ရလဒ်အဖြစ် ED ကနေဆငျးရဲဒုက်ခကိုမြင်လူနာ, ပင်သော်လည်းကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းများကြောင့်အလွန်အကျွံ porn စားသုံးမှုမှ Ed ရှိသည်ဟုသူကပြောပါတယ် ။
ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်နေသည် porn အမျိုးအစားအရေးပါသလား?
Samadi ကယုံကြည်သည်မှာအချို့သော porn အမျိုးအစားများသည် ED ကိုပိုမိုပြင်းထန်သောပုံစံများသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဥပမာ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမျိုးသားများ၏ ED ပြissuesနာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့် ပို၍ ခက်ခဲသောအရာဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်ဤအပြာစာပေရုပ်ပုံများကို ၂၄/၇ တွင်ကြည့်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ် ဦး စလုံးသည်အိပ်ခန်းတွင်လက်တွေ့မကျသောမျှော်လင့်ချက်များရလာကြသည်။
ညစ်ညမ်းသော ED ကိုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်ဟုယူမှတ်ခြင်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအသုံးပြုသူသည်သည်းခံနိုင်မှုကိုတည်ဆောက်ပေးပြီးတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်ပစ္စည်း၏ပိုများလာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားတစ် ဦး ကိုနှိုးဆွရန်ခက်ခဲလေဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် ED ရှိခြင်းဟုလူသိများသောစိုက်ထူခြင်းကိုမခံနိုင်တော့သည့်အထိရောက်လိမ့်မည်။
porn-သွေးဆောင် ED ဆက်ဆံဖို့အဲဒီမှာတစ်လမ်းလား?
လိင်တံသည် porn-induced ED နှင့်ပြtheနာမဟုတ်သောကြောင့်ရောဂါကိုဆေးကုသမှုခံယူရန်အမှန်တကယ်နည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော်၊ လူတစ် ဦး သည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုပါကထိုအခြေအနေများအားဆေးဝါးဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်၊ သို့ဖြင့်သူသည် ED နှင့်အတူသူ၏ပြissuesနာများကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
အများဆုံးလူတို့သညျအဘို့, လေးခြောက်လမှတပတ်ပြန်လည်နာလန်ထူအစီအစဉ်မှာသူတို့အချို့လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သည့်အတွက်အကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာအချို့ receptors desensitize ရန်။ "
စွဲလမ်းမဆိုအမျိုးအစားနှင့်ဝသကဲ့သို့, အလွန်အကျွံ porn ကိုကြည့်မဆိုလွယ်ကူသောပြင်ဆင်ချက်အတူပါလာပေမယ့်အများဆုံးဆက်ဆက်ကု သ. သောအခွအေနေမယ့်မပေးပါ။
စိုက်ထူပြဿနာရှိပါသလား? ဒီအကျင့်ကိုအဘယ်ကြောင့် Be နိုင်ပါစေ
By Denise မန်း
အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Pat အက်ဖ်ဘေ့, III ကို, MD MPH
porn အကဲခတ်အိပ်ခန်းထဲမှာစိုက်ထူငြိမ်းအေးစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်မဟုတျဘဲလိင်တံ, ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 04, 2014
သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖြစ်နိုင်သည်ကဲ့သို့သောယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာများ, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED)? သက်သေအထောက်အထားများအရယောက်ျားသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောယောက်ျား၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အီတလီအမျိုးသား ၂၈၀၀၀ ကိုစစ်တမ်းတစ်ခုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်လယ် 14s ၎င်းတို့၏အစောပိုင်းများတွင်အသက်အရွယ် 20 နှင့်နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာစတင် desensitized ယောက်ျားအရှိဆုံးအကြမ်းဖက်ပုံရိပ်တွေပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ၏ဦးခေါင်းကိုအရ အီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ, ဒီလိင်စိတ်လျှော့ချခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်တစ်ခုစိုက်ထူရဖို့တစ်ခုနိုင်ခြင်းမှဦးဆောင်နေဖြင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Baltimore အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို Johns Hopkins Bloomberg သတင်းဌာန School မှ benchmark သုတေသနအကြောင်းကို 18 သန်းအမေရိကန်ယောက်ျား Ed ကြကြောင်းတွေ့ရှိဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လုံလောက်သောစိုက်ထူမှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အဆိုပါပြproblemနာလိင်တံမှပိတ်ဆို့သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ; သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်။
"အချိန်ကိုအများစုဟာ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါအဖြစ်နာတာရှည်ရောဂါ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သော်လည်းငါ့အထူးသဖြင့်လက်တွေ့တွင်ကျွန်မမြင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရာခိုင်နှုန်း 15 မှ 20 ပြောပါလိမ့်မယ် porn စားသုံးမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Muhammed Mirza ကပြောပါတယ် , MD ဂျာစီစီးတီး, NJ နှင့် ErectileDoctor.com ၏တည်ထောင်သူအခြေစိုက်ထားတဲ့ internist
သင်က Porn-Related ED များအတွက်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါသလား
"သင်ကဒီသည်းခံမှုဆောအဖြစ်ကိုသင် ပို. ပို. ဆွလိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အဖြစ်မှန်ဇနီးတစ်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်နှင့်တကွကြွလာ, သင်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ သိပ်ညစ်ညမ်းလိင်မှလူတ desensitize နိုင်ပြီး,, နောက်ဆုံးမှာသူဟာသာမန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားရနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုငျသညျ, Samadi ရှင်းပြသည်။
နာတာရှည် porn စားသုံးမှု ဦး နှောက်မှဓာတုပစ္စည်းများပြောင်းလဲခြင်းသည်အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု Dr. Mirza ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ခင်ဗျားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုများလာတယ်။ “ မင်းကဘယ်ဗီဒီယိုရုပ်ပုံကိုမဆိုကြည့်ရင်သူတို့ကချီးကျူးကြတယ်။ ဒါကပုံမှန်ခန္ဓာဗေဒနဲ့မတူဘူး။ ”
Samadi သဘောတူခဲ့သည် "ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေထဲကအများစုဟာလက်တွေ့မကျဘူး။ "ဘယ်သူမှနာရီပေါင်းများစွာသွားနိုင်ပါတယ်။ "
Rehoboth, Del ။ မှလူမှုရေး ၀ န်ထမ်းဖြစ်သူ Nicole Sachs က '' Reel 'ရဲ့ဘဝဟာတကယ့်ဘ ၀ နဲ့တော်တော်လေးကွာခြားတယ်' ' အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများတွင်တွေ့ရသောလက်တွေ့မကျသည့်ပုံရိပ်များသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်မိမိကိုယ်ကိုသတိရှိစေပြီးလိင်မှုကိစ္စနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသူမကဆိုသည်။
"ဘာ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလွယ်ကူသောပုံရသည်အစစ်အမှန်အသက်တာ၌အလုပ်ကြာ" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ညစ်ညမ်းအတွက်သို့မဟုတ်ပင်ပြည့်တန်ဆာနှင့်အတူလိင်, အမြန်, လွယ်ကူ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "နီးစပ်ခဲယဉ်းသည်နှင့်ရှက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ " ဟုအဆိုပါ porn တက် Queuing ထဲကလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့တူပုံရပေမည်, သို့သော်ဤတစ်သံသရာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ "သင်ျခြိုခွန်အားမရှိခြင်း begets နှင့်ညစ်ညမ်းစိတ်ဝင်စားကြောင်းထိုအရပ်မှကြီးထွားနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါကုသမှု Porn-Related ED ဘို့ဆိုတာဘာလဲ
porn-related ED ယောက်ျားတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်ဒီဇိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသသည်မဟုတ်, Samadi ကဆိုသည်။ "ပြဿနာကိုလိင်တံမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးဒီကုသမှုမဟုတ်ကဦးနှောက်ရဲ့" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ရှိပါတယ်ဦးနှောက်နှင့်လိင်တံအကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သည်ဤဆေးဝါးများနှင့်အတူစိုက်ထူပေမယ့်မစိတ်ကျေနပ်မှုရစေနိုင်သည်။ "
Samadi ပထမဦးဆုံး ED တာဝန်ရှိသည်ဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထွက်ရှာရန်သမိုင်းကြာပါသည်။ "တစ်စုံတစ်ဦးကညစ်ညမ်း၏တွေအများကြီးကိုကြည့်လျှင်အရှက်အပြစ်ရှိတယ်လို့တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါသီးခြားစီတစ်ဦးချင်းစီမှစကားပြောပါ" ဟုသူကဆိုသည်။
ကုသမှုသည်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအစီအစဉ်နှင့်ဆင်တူသည်ဟုသူကပြောသည်။ ဦး နှောက်တွင်းရှိအချို့သော receptors များအား desensitize လုပ်ရန် 12-4 ပတ်ကြာအစီအစဉ်ဖြင့်စတင်သည်။ စကားပြောကုထုံးသည်နောက်ခံအကြောင်းရင်းအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်။ "အမျိုးသားတွေကမိတ်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့အချိန်ပိုပေးရတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။ “ မိတ်ဖက်တွေကိုတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး ထိတွေ့ဆက်သွယ်ပြီးပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကျနော်တို့ကြိုးစားပါတယ်။ ”
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည့်ပြင်ဆင်မှုမဟုတ်ကြောင်း Sach ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ လိင်ကခင်ဗျားရဲ့ခေါင်းတစ်ဝက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ဝက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတွေကိုကုသဖို့အလုပ်လုပ်တယ်။ ဒီပြissuesနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆေးလုံးမရှိဘူး။